पर्सामा पुन एक मृ'त व्यक्तिसहित थप १७ जनामा को'रोना पुष्टि
पर्सामा पुन एक मृ’त व्यक्तिसहित थप १७ जनामा को’रोना पुष्टि
२०७७ श्रावण ८, बिहीबार
पर्सा, ०८ साउन। पर्सामा पुन: एक मृ’त व्यक्तिसहित थप १७ जनामा को’रोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा बुधबार राति गरिएको परीक्षणमा एक मृ’त व्यक्तिको को’रोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप १७ जनामा को’रोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । मंगलबार साँझ अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको स्वा’ब परीक्षण गर्दा को’रोना पोजिटिभ देखिएको नारायणी अस्थायी को’भिड अस्पतालका इन्चार्ज डा. उदयनारायण सिंहले जानकारी दिए।
गत मंगलबार नारायणी अस्थायी को’भिड अस्पतालमा भर्ना भएका ७० वर्षीय ती पुरुषको मंगलबार साँझ नै मृत्यु भएको को’भिड अस्पतालका इन्चार्ज डा.उदय नारायण सिंहले जनाए । वीरगन्ज माइस्थान निवासी उक्त व्यक्तिको एडभान्स मेडिकेयर हस्पिटलमा उपचारका क्रममा को’रोना संक्रमणको शंका लागेपछि गत मंगलबार नारायणी अस्थायी को’भिड अस्पतालमा भर्ना गरिएका थिए। बुधबार ती मृ’त व्यक्तिमा को’रोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो।
को’रोना संक्रमण पुष्टि भएका १७ जना संक्र’मितमध्ये एक जना नारायणी अस्पतालका र एक जना बाहिर कार्यरत चिकित्सक हुन् । सुख्खा बन्दरगाहका दुईजना स्टाफ, ट्रक चालक र एक निजी स्कुलका कक्षा १० का वि’द्यार्थी समेतमा को’रोना संक्रमण देखिएको छ । बुधबार साँझ संक्रमण पुष्टि भएका सबै जना क्वारे’न्टाइनमा नबसेका व्यक्ति हुन् । नारायणी अस्पतालका प्रमुख मे’डिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.मदनकुमार उपाध्यायका अनुसार संक्रमित १७ जनामध्ये ९ जना पैसा तिरेर(सेल्फ पे’ड) परीक्षण गराएका र अन्य चिकित्सक सिफारिसमा परीक्षणका लागि आएका थिए ।
अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भएका ५ जनाको परीक्षण गरिएको हो । चिकित्सकका अनुसार भर्ना भएकाहरुमा कडा नि’मोनिया देखिएको छ । दुईजना यसअघिका संक्रमितको क’न्ट्याक्ट ट्रे’सिङमा आएका हुन् । ‘४ जना महिलासहित १७ जनामा को’रोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
‘पे’ड टेस्ट’ सुरु भएपछि पछिल्लो समय वीरगन्जमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ । स्वेच्छाले परीक्षण गराएका २४ जनामा को’रोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसमा विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न रहेका व्यक्ति छन् । डा. निरज सिंह वीरगन्जमा को’भिड को समुदायमा फैलिन सुरु भइसकेको दाबी गर्छन् । ‘संक्रमितमा ग’म्भीर प्रकृत्तिको नि’मोनियाको ल’क्षण समेत दखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘क’न्ट्याक्ट ट्रे’सिङ र टे’स्टिङ तीव्र बनाउन आवश्यक छ ।
नेपाली राजदूत डा. अञ्जान शाक्य ‘द एम्बेसडर क्लब अफ इजरायल’ बाट सम्मानित
स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभिन्न पदमा जागिर लगाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने एक जना पक्राउ
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा बेलायती प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामना